Daraasad lagu muujiyay saameynta ay Cusbada ku yeelankarto hoos u dhigida Cunada | TOP NEWS
Daraasad lagu muujiyay saameynta ay Cusbada ku yeelankarto hoos u dhigida Cunada
By Tifaftiraha Somalida Maanta on January 12, 2017 No Comment
In la yareeyo isticmaalka cusbada dunida oo dhan boqolkiiba toban keliya ayaa badbaadin karta malaayiin noloshooda, sida lagu xaqiijiyay daraasad cusub.
Ololeeyayaasha adeegga dadweynaha ay dowladda hoggaaminayso ayaa si ballaaran u dhimi karta dhimashada iyo curyaanimada ka dhalata cusbada-ee kiciso wadna xanuunka iyo stroke, wax dhan 10 senti US sanadkii qofkiiba, ayay cilmi baarayaasha qiyaaseen.
Xataa iyada oo ay ku jirin kaydka caafimaadka, “waxaan ogaanay in dowladda ay taageerayaan, siyaasadda qaranka si loo yareeyo isticmaalka dadka ee sodium boqolkiiba 10 in ka badan 10 sano ayaa ah wax ku ool ah,” ayay qorayaashu ku soo gabagabeeyeen joornaalka caafimaadka BMJ.
Dadka waaweyn badankoodu waxay qaataan in ka badan heerka loogu talagalay ee cusbada ugu badnaan 2 grammes ee maalin kasta, taasoo keentay 1.65 milyan oo dhimasho ah ee cudurka wadne xanuunka sanad kasta, sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka.
Cilmi baarista ayaa muujisay in siyaasadaha qaranka si loo yareeyo isticmaalka cusbada ee yarayn kartaa tirada dadka cadaadiska dhiiga oo sareeya iyo cudurka wadnaha saameeyaan. Laakiin dalal yar ee dunida ku baahsan ayaa qiimeeya kharashka fulinta barnaamijyada.
Daraasad lagu muujiyay saameynta ay Cusbada ku yeelankarto hoos u dhigida Cunada added by Tifaftiraha Somalida Maanta on January 12, 2017